Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Mudaaharaadkii Ardayda Gobolka Oromdu ay Wadeen oo Markale Soo Cusboonaaday.
Deg Deg: Mudaaharaadkii Ardayda Gobolka Oromdu ay Wadeen oo Markale Soo Cusboonaaday.
Warar hordhac ah oo nasoo gaadhaya Itoobiya ayaa sheegaya in markale ay ardayda waxkabarata Jaamacada Wallaggaa (Wallaggaa University) ee gobolka Oromada ay mudaaharaad balaadhan maanta iskugu soobexeen. Mudaaharaadkan oo kubilawday si silmi ah ayay sidii caadiga ahayd Ciidamada Amaanka ee Gumaysiga Itoobaya ay kala hortageen rasaas iyo gumaad aan lookala aabayeelin kaqaybgale yaashii banaanbaxan ay ardaydu sooqaban qaabiyeen.
Sida wararku sheegayaan waxay Ciidanka Gumaysigu toogasho kudileen afar arday oo kamid ah Ardayda waxkabarata Jaamacada Wallagaa. Sidoo kale waxaa lasheegayaa in 200 oo arday tiro kor udhaafaysa ay ay kudhaawacmeen isku dhacan horleh ee maanta markale kasoo cusboonaadan gobolka Oromada. Todobaad kahor unbay ahayd markii inkabadan 47 Arday toogasho lagu dilay boqolaal kalana lagu dhaawacay rabshado kadhacay meelo kamid ah Gobolka Oromada.
Rabshadahan ayaa salka kuhaya qorshe loogu magac daray Balaadhinta Magaalada Addiss Abba (Addis Ababa Master Plan) kaasoo ladoonayo in lagu xalaalaysto dhul ay leeyihiin beeralay kamid ah shacabka qawmiyada Oromada. Nidaamka Gumaysiga Itoobiya hormuudka u ah ee EPRDF/ TPLF ayaa qorshaynaya in dhul beereedkan shacabkii lahaa laga fara maroojistay laga iibsado shirkado dhiig miirato ah oo laga leeyahay wadamo shisheeye ah sida Shiinaha iyo Hindiya.
Ciidamada Gumaysiga Itoobiya oo adeegsanaya awood militari ayaa ardayda qolalkay jaamacada kadaganaayeen xoog kujajabiyay kadibna arday badan kala soobaxay qolalkoodii kuwaasoo dabadeedna loo taxaabay jeelka. Waxaa wali jeelasha kala duwan ee Gumaysiga kabuuxa Ardaydii iyo Macalimiintii todobaadkii hore jeelka lootaxaabay oon wali cadaalada kusheegtay Wayaanuhu maamusho lahorkeenin.
Dhanka kale waxay warar xog ogaal ah sheegayaan inay ku kala qaybsameen xubnihii kagajiray Xisbiga Oromada ee afka qalaad lagu yidhaahdo Oromo People’s Democratic Organization (ODPO). Xisbiga OPDO ayaa kamid ah isbihaysiga wakhtigiisu dhamaaday ee EPRDF. Xubnahan gadooday ee kabaxay EPRDF yaa ku andacoonaya kuwaasoo aad ooga xumaaday dhiiga shacabka ee sida raqiiska ah looqubayo waxayna kudhawaaqeen inaysan kasii aamusnaan karin gumaadka laguhayo Ardayda iyo Shacabka Oromada ee sida nagadgaliya ah umuujiyay dareenkooda sideey ooga xunyihiin qorshahan ladoonayo in lagula wareego dhulbeereedka kuhareeraysan magaalada Addiss Ababa.
Faah faahintan wararka kusaabsan kacdoonka ay Ardayda Oromadu hormuudka uyihiin ee gilgilay Itoobiya waxaad kaheli doontaa wararkaanaga danbe hadii rabbi S.X.W.T.C raali ka ahaado ee haka fogaanina ONA.